Kuzvishandira-basa rekurapa michina yekugadzira - Shenzhen JAK Medical Technology Co., Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Yega-yekuzvishandira ekurapa michina yekugadzira
Yega-yekuzvishandira ekurapa michina yekugadzira
1. Yega-yekushandira firimu muchina
Mushure mekutarisa, ukaona kuti chirevo chacho chakange chisina kunaka? Unonetsekana neruzivo rwekudonha panguva yekubika? Kunzwa kugumbuka mushure mekutora iyo firimu kwenguva refu? â € ¦Zvino, matambudziko aya haachazokunetsa. Jiaweishi yemagetsi maindasitiri kubata kwese-mu-mumwe muchina kunobatsira iwe kuona pachako-sevhisi kunhonga firimu, inova inoshanda uye yakarurama. Mushandisi anogona kuwana iyo firimu uye nekuzivisa nekukenya bha code, kuitira kuti vashandi vakakosha vagone kushandiswa kudzivirira kunyadziswa kunokonzerwa nemurwere ane zita rimwe chete nekutora zvisirizvo mushumo, uye zviri nyore kuti murwere ape chirwere uye nguva yekurapa. Panguva imwecheteyo, inochengetedzawo nguva yekushanda kwevashandi vebazi uye inovandudza kushanda kwebasa redhipatimendi. Iyo yekunhonga firimu ine zvakanakira yekumhanyisa mhanyisa, yakajeka yemhando yemhando, yakanyanya kuzivikanwa, uye inogona kudhinda uchienderera.
Iyo "queuing muchina" yepfupi "iyo nhamba muchina" muchina unogona kunyatso kudzivirira mitsara mirefu uye unopa nyore kune vatengi pavanobata bhizinesi. Panguva imwecheteyo, vatengi vanongoda kutora tikiti pane yekubata skrini yemuchini wekumira pavanobata bhizinesi. Tikiti ine nhamba, huwandu hwevanhu vakamirira, nguva, uye mhando yebhizinesi rakabatwa. Panguva ino, vatengi vanogona kumirira munzvimbo yekuzorora. Munguva ino, vatengi vanongoda kuteerera kune huwandu hwevatauri vanoratidza. Kana mutengi achinzwa nhamba yake kudaidzwa, ingoenderera uye unyore.
3. Chigadzirwa chemidziyo yekurapa
Mukoti anovhura smart medicine cabinet kuburikidza nekuongororwa kweminwe, anotora mushonga wakapihwa zvinoenderana nemirairo yesystem, uye oitumira yakananga kumurwere mumwe nemumwe. Pakutanga kuona, hapana musiyano mukuru pakati pe "smart medicine cabinet" neyakajairika mushonga cabinet Unogona kuona mitsara yemadhirowa madiki ane mushonga kuburikidza nemusuwo wegirazi. Kusiyana neyakajairika mishonga makabati, kune zvakare iri indasitiri yekubata pani komputa mumushonga kabhineti, iine mwenje mwenje yemutsara wega wega wemadhirowa.
Mumwe mukoti akaratidzira mashandisiro acho. Akabata password password nemunwe wake, chigunwe cheminwe chakatariswa nemazvo, uye gonhi regirazi rakavhurwa. Mukoti akawana zita remurwere pachiratidziri uye akasimbisa kuti mwenje uri pamusoro peimwe dhirowa waive wakavhenekwa. Akavhura dhirowa ndokutora kabag kadiki kemushonga. Ipapo, akaburitsa rimwe bhegi remishonga kubva mune rimwe dhirowa raive nemwenje.
Ruzivo rwekunyorerwa rwakaburitswa nachiremba ruchasvika pahurongwa hwefesi uye nemushonga kabhineti. Mu pharmacy, otomatiki mushonga wekupa anopa mishonga, uye wemishonga anozviisa mudhirowa remushonga kabati. Vanamukoti vanogona zvakare kuona mirairo yechiremba uye zvakatemwa pachiratidziro chemagetsi mukabati remishonga. Nekudaro, kana iwe uchida kuvhura smart smart kabhineti, iwe unofanirwa kusimbisa nezvigunwe, uye iwe unogona chete kuvhura iro diki bhokisi riine pre-yakasarudzwa mushonga. Mushure mekunge mushonga waburitswa, dhirowa diki rinobva ravharwa.
Mukupindura kune izvo zvinodikanwa neNational Ministry of Health pane manejimendi yemishonga yakakosha muzvipatara, Jiaweishi yakanyatso gadzira akangwara mushonga kabhodhi rakadzika midzi maindasitiri piritsi komputa kusangana nezvinodiwa zvemakambani makuru ekurapa. Yakangwara mishonga kabhineti inotora musanganiswa weminwe yezvigunwe uye yekodhi yekodhi yemagetsi, yakapetwa kaviri kukiya kuvhura kaviri kuona kuchengetedzeka. Yakaburitswa maindasitiri piritsi komputa ine kamera inogona kutora mifananidzo munguva chaiyo, yekubata skrini, uye manejimendi ruzivo rwezvinhu zvakachengetwa.
Iyo indasitiri yekubata pani yemakomputa mhinduro, yakanyatsobatanidzwa yemishonga yekupa manejimendi uye yekiriniki ruzivo dhata yekudyidzana system kudyidzana, kugadzirisa mashandiro ebasa revashandi vezvokurapa, kuverengera kunyatso dhata, kunyatso kudzora chaiwo madhiragi, kunatsiridza ungwaru nhanho yemidziyo yekurapa, uye unoziva yekurapa kwazvino system.
Akangwara mushonga cabinet system inogamuchira otomatiki dhata kuburikidza neisina musono chinongedzo neYAKE, uye inoratidza nzvimbo iripo, zita, kutaurwa uye huwandu hwemushonga unodiwa zvinoenderana nedhipatimendi dhata munguva chaiyo. Iwo ma LED anovhenekera kuyeuchidza wemishonga kuti awane mushonga zviri nyore uye nekukurumidza. Kunyanya kugadzirisa kunatsa kwemufemesi uye kudzikisira chiyero chekukanganisa kutora mushonga.
Nurses vanopa mishonga kuvarwere sezvakanyorwa, uye vanofanirwa kumhanyira kukhemisi. Kana iwe ukashandisa mushonga uyu kabhineti, nzira yekupa ichave iri nyore, iyo isingangochengetedze chete nguva, asi zvakare kudzivirira zvikanganiso.
Tevere:Zvipatara zvekuzvishandira zvinogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko iwayo?